“Christian Eriksen wuxuu u dhaqaaqi doonaa Real Madrid ama Barcelona.”.-Danny Murphy – Gool FM
“Christian Eriksen wuxuu u dhaqaaqi doonaa Real Madrid ama Barcelona.”.-Danny Murphy
(Yurub) 07 Nof 2018. Laacibkii hore kooxda Liverpool Danny Murphy ayaa sheegay in xidiga reer Denmark iyo kooxda Tottenham Hotspur ee Christian Eriksen ay suuragal tahay inuu u ciyaaro sida kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu dhawaan Danny Murphy kaga hadlay fikirkiisa kaga aadan mustaqbalka Christian Eriksen waxyaabihii uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa.
“Wuxuu aadi doonaa Real Madrid ama Barcelona hadii uu dalab ka helo midkood”.
“Waxaan qabaa in Christian Eriksen uu ka dhaqaaqi doono Tottenham Hotspur si uu ugu biiro Real Madrid ama Barcelona, waxaan u maleynayaa inuu ka faa’iideysan karo fursada uu ugu dhaqaaqi lahaa koox weyn”.
“Dhibaatadu waxay tahay inaanan hubin haddii uu heli doono daqiiqado badan hadii uu u dhaqaaqo koox heer sare ah”.
“Waa ciyaaryahan hal-abuur leh, waa uu fiicnaa labadii xilli ciyaareed ee ugu danbeesay, lakiin uma maleynayo inuu heli doono booska Philippe Coutinho ee kooxda Barcelona”.
Si kastaba kooxo badan ee qaarada yurub ayaa muujiyay xiisahooda kaga aadan saxiixa Christian Eriksen, waxaana kooxahaas hogaaminaya Real Madrid iyo Paris Saint-Germai.